स्टारकिडलाई के मिडियाले साथ दिन्छ ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsस्टारकिडलाई के मिडियाले साथ दिन्छ ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- केही दिन अगाडि अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीले एउटा कुरा बोलिन् । उनले बोलेको कुरा के थियो भने, म स्टारकिड नभएकाले मिडियाले साथ नै दिएन ।
बर्षाको आक्रोश, आफू अभिनित सिनेमा पुरानो बुलेटले दर्शकको माया पाएपनि मिडियाले साथ दिएन । उनले सबैजना स्टारकिडको पछाडि दौडिएको तर्क गरिन् ।
बर्षाको यो तर्कपछि एउटा प्रश्न के जन्मिएको छ भने, के स्टारकिडलाई मिडियाले साथ दिएकै हो ? के मिडियाले साथ दिदैमा स्टारकिडको भविष्य चम्कन्छ ?
बर्षाको सोझै तिर, अभिनेता अनमोल केसीमाथि थियो । अभिनेता अनमोल केसीलाई मिडियाले दिएको उचाइका कारण नै उनी स्टारकिड भनेर लेख्न प्रेरित थिइन् ।
तर, के बर्षाले भने जस्तै अनमोल केसीलाई स्टारकिड भएकै कारण मिडियाले साथ दिएको हो त ?
अभिनेता अनमोल केसी होस्टेल सिनेमामा अभिनय गर्दा अभिनेता भूवन केसीका छोरा थिए । उनलाई भूवन केसीको छोरा भएकै कारणले गर्दा मिडियाले होस्टेलमा साथ दिएको हो । तर, यसपछि भने उनी भूवन केसीकै छोरा भएर टिकेका हुन् त ?
यो भने कदापी होइन । अभिनेतालाई जेरीपछि दर्शकले नै रुचाएका छन् । अझ, अभिनेता केसीलाई उनको स्टाइल, लुक र उनको बोल्ने शैलीका कारण दर्शकले रुचाएका छन् । अभिनेताले यो बचाउन सकेनन् भने उनलाई स्टारकिड भएकै कारण मिडियाले पछ्याउने पक्कै होइन ।
स्टारकिडकै कुरा गर्दा धेरै असफल छन् । द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खड्गीकी छोरी रागिनी खड्गीले केही सिनेमा खेलेर अहिले हराइन् । उनलाई मिडियाले सुरुवातमा माया गर्यो, तर उनले काम गर्न नसक्दा उनी हराइन् ।
अभिनेता सलोन बस्नेत अहिले सिनेमा क्षेत्रमा चलेका छन् । तर, उनी अभिनेता भन्दा पनि सह अभिनेताको रुपमा चलेका छन् । उनलाई हिरोको रुपमा मिडियाले पछ्याउन सकेन ।
स्टारकिड हुनुको एउटा फाइदा, सिनेमामा डेब्यू गर्दा मात्र हो । होइन भने त्यसपछिका सिनेमामा काम गर्न सकिएन भने स्टारकिडको फाइदा कलाकारले लिन सक्दैनन् ।
नेपाली सिनेमामा अहिले स्टारकिडको प्रवेश बढेको छ । यो सुखद कुरा पनि हो । तर, काम राम्रो गर्न नसकेको खण्डमा स्टारकिडको अर्थ पनि केही छैन ।